Imwezve mubairo weApple TV +. Iyo Banker inokunda pa NAACP Image Awards | Ndinobva mac
Imwezve mubairo weApple TV +. Iyo Banker inokunda pa NAACP Image Awards
Nema vatambi ava, kambani yekugadzira uye chikuva cheApple kuseri kweiyo bhaisikopo The Banker, zvakajairika kuti ichi chiitiko chakanaka. Iyo nyaya inoperekedza uye zvakare zvinoita kunge manyepo ekuti isu tiri kutaura nezvenyaya chaiyo yakaitika kwete kare kare muUnited States. Icho chokwadi ndechekuti iyo firimu yakahwina imwe yeakatsigira mu NAACP Mifananidzo Mipiro. Yakatora kukunda muchikamu chemhando yepamusoro yakazvimirira firimu.
Iyo Apple TV Movie + The Banker akunda iyo Akanakira Akazvimirira Firimu Mubairo pa NAACP Image Awards. Meseji yekukorokotedza kubva kukambani yeCalifornia yakatumirwa paTwitter kubva kuakaundi account. Neiyi nzira akapemberera kukunda muchikamu chambotaurwa chemutambo uyu unotaura nezvenyaya yevatengesi vebhizinesi vane ruvara vanofanirwa kusangana nechisarura chenguva yavo.
Rusaruraganda urwo nhasi rwunoratidzika kunge rwuchiri muUnited States Zvinogona kunge zvisiri pachena senge panguva iyoyo, asi kuchine zviyeuchidzo uye ndosaka Apple iri kutendeukira kune iyi nyaya. Nechinangwa chake che Kuenzana Kwemarudzi zvakaitirwa kuti zvinhu izvi zvisaitike zvakare. Iye zvino mubairo uyu unouya neimwe nzira kukorokotedza kambani nebasa rayo rakanaka munzvimbo iyi. Iwo Naacp Image Mhemberero vanopemberera kubudirira uye kuita kwakasarudzika kwevanhu vevara muhunyanzvi, pamwe nevaya vanosimudzira iyo kururamisira kwevanhu kuburikidza nebasa rekugadzira.
Nyeredzi Anthony Mackie naSamuel L. Jackson, "The Banker" anoteera vaviri vebhizimusi vatema pavanenge vachivaka real estate uye banking empire. Kuti ubudirire, ivo vaviri vanounza pabhodhi murungu anoshanda murume kuzviita sechiso chakakomborerwa cheumambo.
Kukudzwa kugona kutaura nyaya senge #TheBanker. Makorokoto kuThe Banker timu pane yavo #NAACPImageAwards kuhwina Yakanakisa Yakazvimirira Inofamba Motion Mufananidzo!
Tarisa ikozvino paApple TV app neApple TV + kunyoreswa. https://t.co/FqDN6q5JXY pic.twitter.com/0lBPml5YsO
- Apple TV (@AppleTV) March 27, 2021
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple TV » Imwezve mubairo weApple TV +. Iyo Banker inokunda pa NAACP Image Awards
Mapikicha ekukurudzira vhidhiyo yemwaka wechipiri weMythic Quest
Hofisi yeMac yakagadziridzwa kuti iwedzere rutsigiro ruzere kuacloud uye maYahoo account